November 5, 2020 - Babal Khabar
Nov52020 by बबाल खबरNo Comments
काठमाडौं उपत्यकाका यी ठाउँमा एक्कस्सी सस्तियो जग्गाको भाउ, जग्गाको मूल्य होटलमा मा’सुभात खाए बराबर !!
काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामध्ये ललितपुरका वि’कट क्षेत्रहरुमा जग्गाको मूल्य निकै सस्तो रहेको मू’ल्याङ्कन प्रतिवेदनले देखाउछ । ३ आनाको घँ’डेरी किन्न काठमाडौंमा करोडौं रकम खर्चिनु पर्छ । ललितपुरको गोटीखेलमा भने प्रति आना १२ सय न्युनतम् मूल्याङ्कन मूल्याङ्कन भएको छ । मालपोत कार्यालय गोटीखेल मातहतका क्षेत्रमा तोकिएको यो प्रति आना जग्गाको मुल्य काठमाडौंका होटलमा २ जनाले मासुभात खाए बराबर छ । गोटीखेल क्षेत्रमा सबभन्दा महंगो भनेको रोपनीको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ हो । गोटीखेलसहित गिम्दी, चन्दनपुर, ठुला दुर्लुङ, बुखेल, मानिखेल, शंखु लगायतका गाउँका जग्गाको लागि आव ०७७/७८ को न्यूनतम मु’ल्याङ्कन हो यो । यो क्षेत्रमा गत आवमा पनि यही मू’ल्याङ्कन थियो । कोभिड-१९ ले सबै क्षेत्रमा अ’सर गरेको भन्दै समितिले जग्गाको मू’ल्यांकन नबढाएको बताएको छ ! गोटीखेल क्षेत्रमा सबभन्दा महंगो भनेको रोपनीको ३ लाख ५० हजार रु
१५ वर्षकी किशोरीले लुकेर बच्चालाई जि’उदै गा’डिन, एकछिन मै भयो सोच्नै नसकिने चमत्कार !! [भिडियो हेर्नुहोस्]
१५ वर्षकी किशोरीले लुकेर बच्चालाई जि'उदै गा'डिन, एकछिन मै भयो सोच्नै नसकिने चमत्कार !! [भिडियो हेर्नुहोस्] आमाले आफुले जन्माएको बच्चालाई जिउदै माटोमा गाडिदिइन् । उनले आफू आमा भएको खबर कसैले पनि थाहा नहोस् । जसको कारण उनले आफ्नो ममता माटोमा पोखिन् । घटना थाइल्यान्डको हो । जहाँ एक किशोरीले आफुले जन्माएको बच्चा खेतमा जिउलै गाडेर आइन् । तर उक्त दिन पिंग पान्ग नामको कुकुरले पत्ता लगायो । कुकुरले बच्चा गाडेको थाहा पाउँदा बित्तिकै बेस्सरी भुकेर मालिकलाई बोलायो । मालिकले कुकुरको इशारामा जमिन खने र बच्चा निकाले । मालिकले बच्चा निकाल्दा गाडेको धेरै समय भएको थिएन् त्यसैले बच्चा जिउदै बाहिर निकाले । बच्चाको आमा खोज्दा १५ वर्षकी एक किशोरी भएको पत्ता लागेको छ र हाल उनी प्रहरीको हिरासतमा छिन् । बच्चाको आमा खोज्दा १५ वर्षकी एक किशोरी भएको पत्ता लागेको छ र हाल उनी प्रहरीको हिरासतमा छिन् । *** पूरा विवरण
एक महिला ३२ वर्षदेखि सामान्य जीवन बाँचिरहेकी थिइन् । उनको विवाह भएको ९ वर्ष बितिसकेको थियो र वैवाहिक जीवन पनि राम्रो चलिरहेको थियो तर अचानक उनलाई थाहा भयो कि उनी एक पुरुष हुन् र उनलाई टेस्टिक्यूलर क्यान्सर छ । भारतको पश्चिम बंगालमा बीरभूममा बस्ने यी महिला शारीरिक रुपमा त महिला हुन् तर आनुवंशिक रुपमा उनी पुरुषको रुपमा जन्मिएकी थिइन् । त्यसपछि थाहा भयो कि यी महिलालाई एन्ड्रोजन इन्सेन्सिटिभिटी सिन्ड्रोम छ जसमा व्यक्तिको शरीर महिलाको हुन्छ तर क्रोमोसोम पुरुषको हुन्छ । यी महिला केहि महिना अघि पेट दुख्ने समस्या लिएर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस क्यान्सर अस्पताल गएकी थिइन् । उनको उपचार गर्ने डाक्टरले उनलाई कस्तो रोग लागेको छ भनेर बुझ्न सकेनन् । क्यान्सर अस्पतालमा कन्सल्टेन्ट क्लिनिकल अन्कोलोजिस्ट डाक्टर अनुपम दत्ता र कन्सल्टेन्ट सर्जिकल अन्कोलोजिस्ट डाक्छर सौमेन दासले उनको उपचार गरिरहेका थिए ।
अक्षय कुमार आफ्नो छोरीको अनुहार किन लुकाउन चाहन्छन्, खुल्यो यस्तो रहस्य !
बलिउडमा सुशान्त राजपुतको निधन पछि परिवारवादको वहस सुरु भएको छ । फिल्मी क्षेत्रमा रहेका बुवाआमाका छोराछोरीले फिल्ममा चर्चा कमाउने तर फरक क्षेत्रवाट आएका कलाकारले अवसर नपाउने भएका कारण सुशान्तले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै वहस सुरु भएको हो । तर बलिउडका अर्का हस्ति अक्षय कुमार भने आफ्नो छोरीको अनुहार क्यामेराको सामुन्ने देखाउन चाहन्नन् । फिल्मी कलाकारको परिवार र उनको छोराछोरीको बारेमा सबैलाई चासो हुन्छ । करिना कपुर र सैफअलि खानका छोरा तैमुर सानै उमेरमा चर्चीत भएका छन् । उनको तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल हुनछन् । तर अक्षयकुमार भने यो सबै कुरा भन्दा फरक छन् । उनी आफ्नो छोराछोरीका बारेमा बाहिर कुरा पनि गर्दैनन् र उनीहरुलाई क्यामेरा सामुन्ने पनि ल्याउँदैनन् । अक्षय कुमारका फिल्म पारिवारिक हुन्छन् । उनी फिल्ममा जस्तै निजि जिवनमा पनि आफ्नो ब्यक्तिगत जिवन र परिवारलाई लिएर निकै संवेदनश
जस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ ! नपढे तपाईलाई प’छुतो हुनेछ !!
अवस्य पढ्नुहोला ,म सु’तेको थिए , मेरी श्रीमतिले मेरो टाउको मालिस गरीरहेकी थिइन ,म बिस्तारै – बिस्तारै निदाए जागेपछी उनले निधारमा भिक्स लगाइदिइन मेरो आँखा खुल्नासाथ उनले सोधिन केही आराम मिल्यो कि नाइ मैले मिल्यो भनेर टाउको हल्लाए फेरि उनले सोधिन कि , खाना खानुहुन्छ मलाई भोक लागेको थियो मैले भने खान्छु ” उनले फटाफट रोटी , सब्जी , दाल ,अचार , सलाद तुरुन्तै मेरो सामनेमा पस्किइन र आधा पल्टी – पल्टी मेरो मुखमा गाँस हाल्दै खुवाइन , मैले चु’पचाप खाना खाएर फेरि ढ’ल्किए श्रीमतिले मलाई आफ्नै हातले खाना खुवाएर उनी खुशी महसुस गर्दै किचनको काममा गइन म चु’पचाप सु’तीरहे र सोच्न थाले कि पुरुष पनि कस्तो हुन्छ । केहिदिन अघि मेरी श्रीमती बि’रामी पर्दा मैले केही पनि गरिन यहाँसम्म कि एक कल फोन गरेर पनि खबर सोधिन उनले पुरैदिन केही खाएकी थिइन ,तर मैले उनलाई ब्रेड पस्किएर आफैलाई गौ’रवान्वित महशुस गरीरहेको थिए |
रा’ती साथीको को’ठामा पुगेकी यी यु’वती, जसले क’ल्पना पनि ग’रिनन् यस्तो होला भन्ने !! (भिडियो)
एक १९ वर्षकी कि’शोरीले दा’वी गरेकी छिन् कि जब उनी रातमा एक युवकको कोठामा गइन् त्यही बेला अ’चानक युवकका अन्य ११ जना साथीहरु आए र सबैले क’रणी गरे । घ’टना साइप्रसको हो,जहाँ बेलायती क’शोरी एक सस्तो रिसोर्टमा बसेकी थिइन् । कि’शोरीले आफू एक युव’कसँग कोठामा भएको स्वीकार गरेकी छिन् । कि’शोरीको उ’जुरीपछि सबै १२ जना युवक विरुद्ध क’र णीको मु’द्दा चलाइएको छ । आ’रोपी सबै युवकहरु इज रायलका हुन् । किशोरी का अनुसार ती युवकहरुले उनी बे’होस भएपछि मात्र छोडेका थिए । किशोरीको श’रीरमा चो’टका कैयौं निशान पाइएका छन् । कि’शोरी साइप्रसको अयी नपा शहरमा पेम्बोस नपा रक्स होटलमा बसेकी थिइन् । घ’टना होटलको दोस्रो तलाको त्यो कोठामा भयो जहाँ इजराय ली युवक आफ्ना दुई साथीहरुसँग बसेका थिए । किशोरीका अनुसार रातको १ बजेसम्म ती युवकहरुले उनलाई छोडेनन् । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******